Ramangwana mhedzisiro yerobhoti uye matsva matekinoroji pane basa | Ehupfumi Zvemari
Gadziridza kune yakanyanya, yakajeka uye ine shanduko shanduko iyo hunyanzvi hutsva uye marobhoti inogona kudzidzira mune chero nharaunda, hazvingambove nyore kana nyore kugadzirisa.
Shanduko uye mhedzisiro inogadzirwa kubva kune iyi mhando yechiitiko inogona kuputika pasina tsitsi mune yakasarudzika nharaunda uye kushamisika kunogona kukurumidza.
Iko kukanganisa kwechiitiko chakadai kune mukana wekuendeswa munzvimbo zhinji dzehupenyu hwevanhu. Nyika yebasa (makambani nevashandi) muenzaniso weizvi, panguva imwecheteyo kukanganisa kwayo kuchakonzera hupfumi hwemunhu newemhuri, zvakare hwenyika nematunhu.
Chaizvoizvo yatove a bhizinesi yanhasi, ine mukana we inobata chikamu chikuru chevanhu mangwana.
Digitization yebasa, inokanganisa tekinoroji, robotization: Aya ndiwo mamwe mazwi zvine chekuita nedambudziko iri umo kuratidzira kunova kwakakosha.
Munhu, chigadzirwa chehunhu hwake hwekugadzira, akagona munhoroondo yese kuita mahombekombe makuru mukutsvaga uye tekinoroji, asi pakati pekukwakuka nemiganhu anofanirwa kutsanangura nekutarisira danho rake rekuita zvakadzama, nekuti panowanzo kuve simba rakawanda uye kugona kuunganidzwa mune zvayakawana uye kufambira mberi, izvo zvinogona kuve boomerang inoguma ichikuvadza munyori wayo.
Kungo taura nezvesimba renyukireya nezvose zvakanaka uye zvinoparadza zvayakaita papasi, uye nekugadzirwa kwevanhu kugona kuishandisa; zvakakwana kuyambira izvo kuratidza zano ichafanirwa kuperekedzwa nekufambira mberi, kuti usarasikirwe kana kupedzisira wakanganiswa zvakanyanya.
Isu tinosvika pachinyorwa ichi nemusoro unoreva iyo hunyanzvi hutsva, marobhoti, huchenjeri hwekugadzira y mhedzisiro pabasa izvo zviri kutotumirwa, asi zviitiko zvacho zvichasimbiswa zvishoma nezvishoma gore rega rega rinopfuura.
Ngationgororei chidzidzo kubva kune mamwe madivi anonakidza, ayo anoratidzika pamwe pamwe nemhedzisiro dzinopokana, uye isu tinogona fungidzira uye fungisisa nezvekuti zvinotibata sei, padanho ripi, zvakanakira - zvinokuvadza uye kana tikakwanisa kuenzanisa mhedzisiro yaro yakanaka uye yakaipa, zvirinani kufunga nenzira iyo nyaya yacho inosvikwa nayo nhasi.
1 Unokanganisa matekinoroji uye kugadzira mabasa
2 Ko tekinoroji inogona kutiita isu rusaruraganda?
3 Iyo tech chikamu inogona kugadzira mabasa
3.1 Reaction time and adaptation to change Zvingatipe nguva here?
Unokanganisa matekinoroji uye kugadzira mabasa
ari kushungurudza technologies, anonziwo zita kuvhiringidza hunyanzvi, iwo iwo matekinoroji uye zvigadzirwa zvinokonzeresa zvihombe kana zvidiki kugadziridzwa, zvine hunyanzvi hwekunyangarika kana hwekugadzira michina, zvishandiso uye zvigadzirwa zvisipo.
Nenzira iyi, zvinokwanisika kukwikwidza zvine hungwaru nekukurira matekinoroji panguva yakatarwa, kumisikidza nekusimbisa mumusika.
Mukukanganisa kutsva, kana kukaongororwa munguva pfupi, zvinogona kupikiswa kuti pane mukana mukuru wekuti zvizoitika kuwedzera kwekushaikwa kwemabasa mune mamwe masevhisi. Kunyangwe zvichidikanwa kutaura, izvo tichifunga nezvenguva yakareba, kana paine kuwedzera mukugadzirwa, mabasa anogona kugadzirwa.
Marobhoti uye nehungwaru hwekunyepedzera zvinokanganisa nzanga nebasa
Chakagadzirwa njere uye marobhoti chichava chinotevera svetuka iyo vanhu ichapa, inongofananidzwa nemabhizimusi anomukira akachinja nyika panguva iyoyo.
Mukubata nemusoro werobhoti uye nehungwaru hwekunyepedzera, takatanga kutaura ne njodzi dzinogona kuitika uye masimba, izvo zvinogona kufambirana pamwe nekugadzirwa kwevanhu.
Pamwe isu tave kuswedera kune ramangwana umo munharaunda, kuve nebasa pachezvaro hazvinganzwisisike kuongorora kana munhu aine kodzero yekudya. Zvinonzi zvinogona kudaro, kushomeka kwebasa kunoenderana papasi nekuda kwezvikonzero zvataurwa.
Forrester, kambani yekutsvagisa misika, yakati zvimwe angangoita mamirioni makumi maviri nemashanu emabasa anogona kutsakatika mumakore gumi, Chigadzirwa kufambira mberi kwetekinoroji.
Kana marobhoti nehungwaru hwekunyepera zvasvika, uye zvinosvika zvakakomba, nesimba rese uye nekukanganisa kwavachave nako pane hupfumi, nzanga uye nebasa; ipapo hapana chinosara kunze kwekufunga zvakare zvinhu zverudzi urwu, dai zvisina kuitwa mushe mushe.
Vazhinji vanoona ramangwana zvakanaka, uye ivo vanoti hapana chinosara kunze kwekugadzirisa uye kuzvimisazve pachayo pahunyanzvi.
Zvakangwara kusvika pazviitiko izvi uine ruzivo rwakakwana. Chero nzira, gore negore vanozowedzera mazuva ese muhupenyu hwedu rudzi urwu rwetekinoroji, uye iyo assimilation maitiro ichakura.
Kana shanduko dzikauya, nyaya zhinji dzine chekuita ne mutero, hupfumi uye basa. Iko kukanganisa kwehunyanzvi hwekunyepedzera kunharaunda kuchave kwakasimba kwazvo.
Dzimwe nyanzvi dzinovimbisa kuti marobhoti ivo havazove vachitsiva mabasa ivo vega. Ndokunge, ivo havazofungi kana kugadzirirwa ichi chinangwa, asi panzvimbo ye chinja mabasa.
Iyo tarisiro ichave yekugona kutsiva iwo mabasa kana kudzokorora zviitiko kana izvo zvinoda kunyatso kujeka, nyaya iyo tekinoroji yaizokwanisa kupa.
Izvo hazvireve kuti zvinofanirwa kuve zvakaipa, asi chenjera!
When the digitization inobatanidzwa mukuita basa, iwo mwero wekuita uye kugadzirwa kunogona kuwedzerwa zvakanyanya, uye zvakare mabasa anogona kuwedzera.
Zvinonzi kana Spain ikaisa mari yakakwana mune izvi kusvika 2020, 250 mabasa matsva anogona kugadzirwa gore rega. Izvi zvataurwa na CEOE (Spanish Confederation yeMabhizinesi Masangano).
Dzimwe nyanzvi ndedzekufunga, kuti fungidziro dzerudzi urwu dzinotarisira zvakanyanya. Vanobvumirana kuti ndezvechokwadi kuti hunyanzvi hwehunyanzvi hunokwanisa kugadzira hupfumi nebasa. asi kwete munguva pfupi yakadaro.
Kupfuura izvi, kune kunyange maonero ekuti kwete chaizvo kuvapo kwenyika ine hunyanzvi uye yedhijitari ichaunza mamwe mabasa, Kana zvisiri zvinopesana.
Makambani anoita mari hombe mukushambadzira uye matekinoroji azvino anozove nehupamhi hwepamusoro, asi panguva imwechete vachazoda vashoma vashandi.
Dzimwe nyanzvi dzinoti digitization uye kufambira mberi kwetekinoroji nenzira yakakwenenzverwa hazvisi izvo chaizvo izvo zvinofanirwa kutungamira nzanga kune mamiriro ekuramba uchiwedzera urovha.
Kana kugadzirwa kukawedzera, pachave nehukuru hwepasi rose hupfumi, huchigadzira nenzira iyi mitsva inoda uye mamwe mabasa muzviitiko zvakasiyana.
Kune rimwe dambudziko uye zvine chekuita nenyaya yekuti mabasa ane hukama hwakakosha nejitekinoroji inoda a kugona kwakakwana kwekugadzira pamwe kudzidziswa kwakaringana.
Ivo vasina kubatanidzwa nerudzi urwu rwehunyanzvi zvinoda imwe nguva yenguva kuti vakwanise kuishandisa. Kufambira mberi uku kuchafanirwa kuperekedzwa nebasa rezvemagariro pamwe nekudyara kwakasimba muvagari.
¿Ko tekinoroji inogona kutiita isu rusaruraganda?
Japan inyika yehunyanzvi uye nzanga mune tekinoroji. Ivo vanorondedzera zvirinani kumarobhoti mumafekitori avo pane kune vanobva kune dzimwe nyika vanokwikwidza mabasa. Urwu rusarura here? … Zvasara kuti zvionekwe.
Iko kuongorora kwakaomarara kana iko kukoshesa kwakakwira uko tekinoroji uye zvese zvine hukama zvitsva mune ino nharaunda zvinounza kune zvigadzirwa zvakanyatso kuongororwa, zvichibvumira mhando uye musiyano wehunyanzvi.
Iyo tech chikamu inogona kugadzira mabasa
Kwete vashoma nyanzvi vanopokana kuti matambudziko ebasa uye nharaunda, zvinounza mavari shanduko dzinogara dzichiitwa mune akasiyana mamiriro. Kune rimwe divi mabasa anodonha nekuda kwedambudziko munyika dzakasiyana, asi panguva imwechete zviripo gadzira mabasa izvo zvaive zvisipo kare.
Iyo tekinoroji uye R + D + i (research, budiriro uye hunyanzvi) chikamu chine mukana wakakura wekugadzira mabasa. Kuti nyika igadzirise uye iite nenzira isingafungire, inoda kuburitsa ruzivo rwesainzi uye rwetekinoroji, sezvo makambani ayo achifungidzirwa zvine simba muR + D + i. Shanduko yedhijitari ichave nezvakawanda zvekuita nayo.
Kwese kuedza kunoitwa nenyika kusimudzira tekinoroji nekudyara mukuvandudza uye kusimudzira, zvichafarira kugadzirwa kwemabasa. Mienzaniso ndeiya inowirirana nebiotechnology, ICT (ruzivo uye tekinoroji matekinoroji) uye e-commerce.
MuSpain, Zvakatotaurwa nevanyanzvi kuti iyo tekinoroji chikamu ichave imwe yeaya achaunza mabasa mazhinji munguva pfupi.
Reaction time and adaptation to change Zvingatipe nguva here?
Nyika dzenyika dzakasangana nekutsakatika kwemabasa panguva dzakatarwa munhoroondo yavo. Hupfumi hwepasi rose hwave neshanduko huru sezvo kwave kuri kufamba kubva kuhupfumi hwekumaruwa kuenda kune imwe yeindasitiri.
MuU.SA semuenzaniso, chiitiko ichi chakaonekwa munguva (1870-1970) iine makore zana. Panguva iyoyo vakanyangarika padhuze ne 90 muzana yemabasa kubva kumaruwa.
Munyika imwe chete iyi uye mudariro pakati pa1950 - 2010, semhedzisiro yekufambira mberi kwetekinoroji, angangoita 75% emabasa mumafekitori.
Imwe yemhedzisiro yakaonekwa yakanangana neichi chiitiko ndeyekubuda kwe "hupfumi hwebasa". Kunyangwe ipapo, huwandu hukuru hwemabasa hwakauya kubva kubazi rebasa uye kwete kubva kune chinogadzira chikamu.
Mamiriro edu ezvinhu nhasi anova akaomarara, nekuti nguva yakareba yakadaro yekugadzirisa haigoneki senge iyo yakaverengwa mumienzaniso yataurwa, makore makumi matanhatu kana zana.
Zvichava zvakafanira kuti ukwanise chinja mu10 kana 15, zvikasadaro tinogona kuzviwana tiri mumatambudziko makuru, pamwe tichitarisana dambudziko guru rekushaya mabasa yenguva dzese.
Isu takaona kuti haazi maonero ese akafanana, kuti dambudziko harisi nyore, uye kuti nyika nenzanga vari munzira kuenda kuchinhu ichi, zvatove kufungidzirwa zvisingaiti.
Zvemagariro uye zvematongerwo enyika, pamwe nebhizinesi munda, dzinofanira kuenzaniswa kuti kusvetuka uku kuve kwakabatana uye mhedzisiro pabasa inoderedzwa, kugadzirisa kuenderana neshanduko iri kuuya, munzira yakanakisa uye nehungwaru kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Basa » Yemberi mhedzisiro yemarobhoti uye matsva matekinoroji pane basa